» “जेठान र सम्धी ,काण्डमा मुछिएका, चोलेन्द्रलाई कसैले भन्न आँट नगरेको, कुरा फ्याट्टै ,भनिदए डा दिक्षितले” “जेठान र सम्धी ,काण्डमा मुछिएका, चोलेन्द्रलाई कसैले भन्न आँट नगरेको, कुरा फ्याट्टै ,भनिदए डा दिक्षितले” – हाम्रो खबर
“जेठान र सम्धी ,काण्डमा मुछिएका, चोलेन्द्रलाई कसैले भन्न आँट नगरेको, कुरा फ्याट्टै ,भनिदए डा दिक्षितले”
हाम्रोखबर संवाददाता 61 Views
“प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराको जेठान प्रकरण छताछुल्ल भए पछि नागरिक समाजका अगुवा डा सुन्दरमणी दिक्षितले मुख भरिको जवाफ दिएका छन् ।
“ओटीभी नेपाल डक कम सँगको विशेष कुराकानीमा वरिष्ठ चिकित्सक समेत रहेका डा दिक्षितले न्यायमुर्ती भएर चोलेन्द्रले गरेको यस्तो हर्कतलाई जनताले थुकिसकेको बताएका छन् ।”
“मान्छे गिर्नु परे पछि कति सम्म गिर्न सक्दो रहेछ भन्दै डा दिक्षितले चोलेन्द्र शमशेर राणाले आज सम्म कमाएको इजत जति सबै माटोमा मिलाएको पनि बताए । इजत कमाउँन धेरै समय लाग्छ तर गुमाउँन एक मिनेट पनि लाग्दैन अहिले राणालाई त्यस्तै भएको छ । दिक्षितले भनेका छन् ।”
“राणाको कोटा बाट मन्त्री बनेका गजेन्द्र हमालले राजिनामा दिएका छन् तर राजिनमा दिएर पनी उनलाई मन्त्री बनाउँनेहरु उम्कन नपाउँने डा दिक्षितले बताएका छन् । यसमा मन्त्री बन्नेको भन्दा पनि भागशान्तीमा बनाउँनेहरुको दोष रहको पनि उनले बताए ।”
“हमाल काग्रेसको कोटा बाट मन्त्री बनेको भन्नेहरुलाइ्र्र पनि डा दिक्षितले गतिलो जवाफ दिएका छन् । के एक जना पनि मन्त्री बन्न लायक काग्रेसी सांसद नभेटेर खोजि खोजि कहिले भोट हालेको काग्रेस छन् भनेर मन्त्री बनाएको हो ? डा दिक्षितले भनेका छन् ?
“हमाललाई मन्त्री नबनाइ नहुेन आवश्यकता के हो ? हामीले त उनको नाम कहिल्यै सुनेको पनि थिएनौँ । सांसद समेत नभएको मान्छे मन्त्री नबनाउँदा देशै चल्दैन जसरी मन्त्री बनाइएको छ यसको कारण केहो भन्दै डा दिक्षितले प्रश्न गरका छन् ।”
“देउवाले काग्रेस पार्टीनै समाप्त पार्न लागको डा दिक्षितले बताएका छन् । जति दिन देउवा सरकारमा रहन्छन् त्यत्ती दिन काग्रेसको हालत झन खस्कँदै जान्छ र आउँदो चुनावमा नराम्रो सँग पराजित हुन्छ। डा दिक्षितले भनेका छन् ।”
“यहि देउवा, यहि प्रचण्ड माधवहरुले ओली सँग चुनाव लड्न सक्छन् ?कदापी सक्दैनन् भन्दै दिक्षितले यिनीहरुको यस्तै हर्कतले जनता अहिले सबै ओली तिर ढल्कीसकेको बताए । परमादेशको कमाल अझै के के सुन्नु पर्ने हो भन्दै डा दिक्षीतले लाकेतन्त्रनै खतरामा परेको पनि बताए ।”
“नागरिक समाजका अगुवा वरिष्ठ चिकित्सक डा सुन्दरमणी दिक्षित सँग ओटीभी नेपाल डककमले गरको भिडियो कुराकानी हेर्नुहोस्”